တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေအသစ်များကို အမေရိကန်က ဖျက်သိမ်း | Myanmar Mobile App
Home Trending Social တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေအသစ်များကို အမေရိကန်က ဖျက်သိမ်း
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေအသစ်များကို အမေရိကန်က ဖျက်သိမ်း
CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 10: Apple's senior vice president of worldwide marketing Phil Schiller talks about the new iPhone 11 Pro during an Apple special event on September 10, 2019 in Cupertino, California. Apple is unveiling new products duringaspecial event at the Apple headquarters in Cupertino, California. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
၁၅ ရာနှုန်းအကောက်ခွန်က iPhone နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကိုထိခိုက်မှာပါ
ဒီနေ့မနက်မှာ သမ္မတက တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အဆင့်မြင့်သဘောတူစာချုပ်ကို သဘောတူပြီးပါပြီလို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်များကို သူတို့အနေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် တရားစွဲဆိုမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ iPhones နဲ့ laptop တွေလို စားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များအပါအဝင် တရုတ်လုပ်ပစ္စည်းများအပေါ် ဈေးနှုန်းမြှင့်နိုင်သည့် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းအကောက်ခွန်များဟာ ညှိနှိုင်းမှုကာလအတွင်း နှောင့်နှေးခဲ့ပြီး အခုအခါမှာတော့ လုံးဝအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ပါဘူး။
Wall Street ဂျာနယ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရဆိုရင် တရုတ်ထုတ်ကုန်အချို့အပေါ် အမေရိကန်ရဲ့အကောက်ခွန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆက်လက်တည်ရှိနေပေမယ့်လည်း စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှာ စတင်သက်ရောက်တဲ့အခွန်ကို အခုတော့ ထက်ဝက်လျှော့ချပြီး ၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယူအက်စ်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှအချက်အလက်စာရွက် (PDF) ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာတော့ စာချုပ်ထဲမှာ လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာ အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုမိုဝယ်ယူဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်များပါဝင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုများ စတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။
Donald Trump ဟာ အောက်တိုဘာလထဲမှာ “အဆင့်တစ်” သဘောတူစာချုပ်ကိုကြေငြာခဲ့ပြီး တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူညီချက်မှာ ဝယ်ယူမှုတိုးမြှင့်ရေးအစီအစဉ်များ ပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပမာဏရှိသလဲဆိုတာတော့ တိတိကျကျဖော်ပြမထားပါဘူး။
၁၅ ရာႏႈန္းအေကာက္ခြန္က iPhone ႏွင့္အျခားထုတ္ကုန္မ်ားကိုထိခိုက္မွာပါ
ဒီေန႕မနက္မွာ သမၼတက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႕ အဆင့္ျမင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူၿပီးပါၿပီလို႕ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သူတို႕အေနနဲ႕ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ iPhones နဲ႕ laptop ေတြလို စားသုံးသူအီလက္ထ႐ြန္နစ္ထုတ္ကုန္မ်ားအပါအ၀င္ တ႐ုတ္လုပ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္ႏိုင္သည့္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းအေကာက္ခြန္မ်ားဟာ ညႇိႏႈိင္းမႈကာလအတြင္း ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး အခုအခါမွာေတာ့ လုံးဝအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေတာ့ပါဘူး။
Wall Street ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရဆိုရင္ တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕အေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕အေကာက္ခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္လက္တည္ရွိေနေပမယ့္လည္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွာ စတင္သက္ေရာက္တဲ့အခြန္ကို အခုေတာ့ ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
ယူအက္စ္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမွအခ်က္အလက္စာ႐ြက္ (PDF) ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာေတာ့ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ လာမယ့္နွစ္ေတြအတြင္းမွာ အေမရိိကန္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမို၀ယ္ယူဖို႕အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ကတိက၀တ္မ်ားပါ၀င္တယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမ်ား စတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕လည္း ေရးသားထားပါတယ္။
Donald Trump ဟာ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ “အဆင့္တစ္” သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုေၾကျငာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေက်းလက္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ၀ယ္ယူမႈတိုးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပမာဏရွိသလဲဆိုတာေတာ့ တိတိက်က်ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။
Previous articleAndroid နဲ့ iOS မှာ ဘာသာစကားပေါင်း ၄၄မျိုး ပြန်ဆိုပေးနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Google Assistant
Next article4K display ပါဝင်တဲ့ Pixelbook Go ကို ဒေါ်လာ၁၃၉၉ ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီ